IK4 ▷➡️ - ဗီဒီယိုဂိမ်းနှင့်ခလုတ်များအကြောင်း All
macOS / IOS ကို / Apple
Windows ကို 8
Windows ကို 7
အင်တာနက်နှင့် browser များ
တစ်ပတ်အတွင်း တင်ပါးကို ဘယ်လို ဆုံးရှုံးရမလဲ။
ငါ့ကြောင်ထဲမှာ ကြောင်တွေ ပိုရှိမရှိ ဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ။
ပုတ်သင်ညိုက ဘယ်လိုမျိုးလဲ၊ အဲဒါက ဘာကျွေးတာလဲ။
ကိုယ်အလေးချိန်နဲ့ ကြွက်သားထုထည်ကို ဘယ်လို မြှင့်တင်ရမလဲ။
စက္ကူ origami ကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲ။
3×3 matrix ၏ အဆုံးအဖြတ်ကို မည်သို့ရယူရမည်နည်း။
တကယ့် ရေသူမလေးဖြစ်ဖို့ ဘယ်လိုလဲ။
ငှက်ငယ်လေးတွေအတွက် ထောင်ချောက်တွေကို ဘယ်လိုဖန်တီးမလဲ။
Vocho ကို အချိန်မီ ဘယ်လိုတင်ရမလဲ။
Quad တစ်ခုကို ဘယ်လိုစရမလဲ။
ကျွန်ုပ်၏ Wii ကို မည်သို့ hack မည်နည်း။
လျှပ်စစ်မီးမလိုပဲ အိမ်လုပ်မီးအိမ် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။
ဖော်မတ်မချမီ ဟာ့ဒ်ဒရိုက်တစ်ခုမှ ဒေတာကို မည်သို့ အရန်ကူးမည်နည်း။
သေလွန်သောနေ့အတွက် ကတ်ထူမျက်နှာဖုံးကို မည်သို့ပြုလုပ်ရမည်နည်း။
သင့်မျက်တောင်တွေကို ဇွန်းနဲ့ ဘယ်လိုကောက်မလဲ။
မိန်းမပီသတဲ့ ယောက်ျားကို ဘယ်လို ချစ်ကြမလဲ။
ငါ့လက်မှာ ကလေးဘယ်နှစ်ယောက်ရှိမယ်ဆိုတာ ဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ။
pineal gland ကို ဘယ်လိုအသက်သွင်းရမလဲ။
ဝမ်းဗိုက်ကို မြန်မြန် ဘယ်လို လျှော့ချမလဲ ။
Moringa ကို ဘယ်လိုစိုက်သလဲ
မျက်နှာပေါ်က တင်းတိပ်တွေကို ဘယ်လိုအမြန်ဖယ်ရှားရမလဲ။
HP Ink Cartridge တွေကို ဘယ်လိုပြန်ဖြည့်မလဲ။
မိန်းမတစ်ယောက်ကို လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ရူးသွပ်အောင် ဘယ်လိုတွန်းထုတ်မလဲ?
နှာတံကို မိတ်ကပ်နဲ့ ဘယ်လို ချွန်မလဲ။
SRT စာတန်းထိုးတွေကို ဘယ်လိုထည့်မလဲ။
Glossy painting matte ကို ဘယ်လိုဖန်တီးမလဲ။
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ တင်းမာမှုကို ဘယ်လိုဖန်တီးမလဲ။
သံချေးတက်နေတဲ့ သံကို ဘယ်လိုသန့်စင်မလဲ။
ဘရာဇီးမှာ သူတို့ ဘယ်လိုပြောကြလဲ။
IPhone အကြိုက်ဆုံးအဆက်အသွယ်များ - သူတို့ဘာတွေလုပ်နေလဲ၊ သူတို့ကိုဘယ်လိုမှန်ကန်စွာတပ်ဆင်မလဲ
iPhone အကြိုက်ဆုံး အဆက်အသွယ်များ- ၎င်းတို့အတွက် မည်သည်နှင့် ၎င်းတို့ကို မှန်ကန်စွာ သတ်မှတ်နည်း လွန်ခဲ့သည့် 15 နှစ်ခန့်က မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းများစွာတွင် စိတ်ကြိုက်အဆက်အသွယ်များ ဖန်တီးခြင်း လုပ်ဆောင်ချက်ကို အသုံးပြုခဲ့သော်လည်း ထိုအချိန်က လိုချင်သောနံပါတ်ကို အမြန်ခေါ်ဆိုနိုင်စေရန် တစ်ခုတည်းသော ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ . ခေတ်မီမိုဘိုင်းလည်ပတ်မှုစနစ်များတွင်၊ လမ်းညွှန်ရှိ "အကြိုက်ဆုံးများ"... ပိုပြီးဖတ်ပါ
iPhone မှအမည်မဖော်ပြသောဆက်သွယ်ရန် - အဘယ်ကြောင့်နှင့်မည်သို့ပြင်ဆင်ရမည်နည်း။
iPhone ရှိ အမည်မဲ့ အဆက်အသွယ်များ- အဘယ်ကြောင့်နည်းနှင့် ၎င်းကို မည်သို့ပြုပြင်ရမည်နည်း။ ပြင်ပကုမ္ပဏီဝန်ဆောင်မှုများ သို့မဟုတ် ဆင်းမ်ကတ်မှ အဆက်အသွယ်စာရင်းကို iPhone သို့ တင်သွင်းရာတွင် ပြဿနာသည် အတော်လေးအဖြစ်များပြီး အများစုမှာ နာမည်ပျောက်နေသကဲ့သို့ ပေါ်လာသည် (ဂဏန်းနံပါတ်များကိုသာ ပြသထားသည်)။ အတူတူ … ပိုပြီးဖတ်ပါ
လိုက်ဖက်တဲ့အရာတစ်ခု - ပိတ်ဆို့ခြင်းပုံနှိပ်ခြင်းကိုရှောင်ရှားရန်
တွဲဖက်သုံးနိုင်သော ကျည်တောင့်များ- ပရင့်ထုတ်ခြင်းအား ပိတ်ဆို့ခြင်းမှ ရှောင်ရှားနည်း အချို့သော ပရင်တာမော်ဒယ်များသည် သင့်အား ပရင့်ထုတ်ရန်အတွက် မူရင်းကျည်တောင့်များကိုသာ အသုံးပြုခွင့်ပေးသည်။ QuimeraRevo တွင်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် တွဲဖက်သုံးနိုင်သော ကျည်တောင့်များကို တပ်ဆင်လိုပါက ပရင့်ကို ပိတ်ဆို့ခြင်းမှ ရှောင်ရှားနည်းကို ရှင်းပြသည့် လမ်းညွှန်ချက်တစ်ခု ပြုလုပ်ရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ အချက်အလက်တွေကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားဖို့ပဲ လိုတာပါ... ပိုပြီးဖတ်ပါ
VIP အဆက်အသွယ်များ - အရေးကြီးသောအီးမေးလ်စာရင်းတစ်ခုကို iPhone၊ iPad နှင့် Mac တို့တွင်မည်သို့တည်ဆောက်ရမည်
VIP အဆက်အသွယ်များ- iPhone၊ iPad နှင့် Mac ပေါ်ရှိ Mail တွင် အရေးကြီးအီးမေးလ်များစာရင်းကို ထည့်သွင်းနည်း Mail အက်ပ်ရှိ အဆက်အသွယ်များကို ရှာဖွေခြင်းသည် ၎င်းတို့အား VIP အဆင့်သတ်မှတ်ပေးခြင်းဖြင့် ပိုမိုလွယ်ကူစေသည်။ VIP (အလွန်အရေးကြီးပုဂ္ဂိုလ်၊ “အလွန်အရေးကြီးပုဂ္ဂိုလ်” ဟုဘာသာပြန်သည်) ကို ဝင်စာပုံးတွင် ညွှန်ပြသည်... ပိုပြီးဖတ်ပါ
Spotify Cracked iOS 2021: ဘယ်လိုထည့်သွင်းရမလဲ
Spotify Cracked iOS 2021- မည်သည့် iPhone တွင်မဆို Spotify ကို အခမဲ့သုံးရန် Safari အက်ပ်ကို ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရမည့် ကောင်းသောနေ့ရက်များကို သတိရပါ။ မင်း ဒီနေ့ လုပ်နိုင်သေးတယ် ဆိုတာ မင်းသိထားရမယ်။ ကမ္ဘာပေါ်တွင် လူကြိုက်အများဆုံး ဂီတဝန်ဆောင်မှုကို ဖန်တီးသူဖြစ်ပြီး... ပိုပြီးဖတ်ပါ
PirateBay - အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းများသို့မဟုတ်ဆိုက်ကိုမည်သို့ ၀ င်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်သည်
The PirateBay- အကောင်းဆုံး အခြားရွေးချယ်စရာများ သို့မဟုတ် Pirate Bay (TPB ဟုလည်း ခေါ်သည်) ဝင်ရောက်နည်းသည် torrent ဝါသနာရှင်တိုင်း သိထားသင့်သည့် torrent site ဖြစ်ပြီး၊ တကယ်တော့ ၎င်းသည် ဝဘ်ပေါ်ရှိ အပြင်းထန်ဆုံး ပေါ်တယ်ဟု ခေါ်သည်။ ပင်လယ်အော်သည် အမှန်တကယ် အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး အဆိုပါဆိုက်ကို Pirate Party မှ တည်ထောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်... ပိုပြီးဖတ်ပါ
Windows 7000 ရှိ Service Control Manager အမှားနံပါတ် ၇၀၀၀၊ ၇၀၀၁၊ ၇၀၀၁၊ ၇၀၁၁၊ ၇၀၂၃၊ ၇၀၃၁၊ ၇၀၃၄၊ ၇၀၄၃ ။
Windows 7000 တွင် Service Control Manager အမှားကုဒ် 7001, 7009, 7011, 7023, 7031, 7034, 7043, 10- ဘာမျှော်လင့်ရမလဲ နှင့် ၎င်းကို မည်သို့ပြင်ဆင်ရမည်နည်း အကယ်၍ သင်သည် Windows 10 ၏ event view တွင် ကြည့်ရှုသော သုံးစွဲသူများထဲမှ တစ်ဦးဖြစ်ပါက (Win အမှားများကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရန် +R – eventvwr.msc) ဖြစ်နိုင်ခြေအားလုံးတွင် အမှားများပါရှိသည်ကို သင်တွေ့လိမ့်မည်... ပိုပြီးဖတ်ပါ
DPI အပေါ် အခြေခံ၍ A4, A3, A2, A1 နှင့် A0 စာရွက်များ၏ pixel အရွယ်အစားသည်အဘယ်နည်း။
DPI ကိုအခြေခံ၍ A4၊ A3၊ A2၊ A1 နှင့် A0 စာရွက်များ၏ pixel အရွယ်အစားသည် အဘယ်နည်း။ ခေတ်မီ PC နှင့် မိုဘိုင်းလ်အသုံးပြုသူအားလုံးနီးပါးသည် ကြည်လင်ပြတ်သားမှုအကြောင်းတစ်ခုခုကို သိရှိကြပြီး ပိုကောင်းသောအာရုံခံကင်မရာ၊ ပိုကောင်းသောမော်နီတာရုပ်ပုံနှင့် အရည်အသွေးပိုကောင်းသော ဗီဒီယိုတို့ကြား ကွာခြားချက်ကို ပြောပြနိုင်သည်... ပိုပြီးဖတ်ပါ
Mac OS Task Manager နှင့် System Monitoring မှအခြားရွေးချယ်စရာများ
Mac OS Task Manager နှင့် Novice Mac OS အသုံးပြုသူများ မကြာခဏ တွေးမိသည်- Mac OS Task Manager သည် မည်သည့်နေရာတွင် ရှိပြီး ၎င်းကို မည်သည့်ကီးဘုတ် ဖြတ်လမ်းမှ လွှင့်တင်သည်၊ ချိတ်ဆွဲထားသော ပရိုဂရမ်ကို ပိတ်ရန် အသုံးပြုနည်း နှင့် အခြားအရာများ။ ဖန်တီးနည်းကို အတွေ့အကြုံအရှိဆုံး အံ့ဩစရာ... ပိုပြီးဖတ်ပါ
Android ပေါ်ရှိ Gallery မှ ပုံများ ပျောက်ကွယ်သွားပါက တစ်ခါတစ်ရံတွင် Android စမတ်ဖုန်းများတွင် ပြဿနာတစ်ခု ကြုံတွေ့ရနိုင်သည်- သင်သည် “Gallery” ကိုဖွင့်ထားသော်လည်း ပုံများအားလုံး ပျောက်ဆုံးနေပါသည်။ ဒီလိုကိစ္စတွေမှာ ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာ ပြောပြပေးချင်ပါတယ်။ အကြောင်းရင်းများနှင့် ပြဿနာကို ဖြေရှင်းရန် နည်းလမ်းများ ဤကျရှုံးရခြင်း၏ အကြောင်းရင်းများကို အုပ်စုနှစ်စု ခွဲခြားနိုင်သည်။... ပိုပြီးဖတ်ပါ
Supercell id အီးမေးလ်ကိုဘယ်လိုပြောင်းမလဲ။
Supercell ID အီးမေးလ်ကို ဘယ်လိုပြောင်းမလဲ။ Clash of Clans ၏ပရိသတ်များအတွက်၊ သင့်အား ပိုမိုကောင်းမွန်သောရလဒ်များရရှိစေရန် ကူညီပေးမည့် အစိတ်အပိုင်းအသစ်များကို ခံစားနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ သင်သည် Super Cell ID အီးမေးလ်မှ ပြောင်းနိုင်ရုံသာမကဘဲ ဂိမ်းကိုခံစားရန် စက်ပစ္စည်းများစွာကို ချိတ်ဆက်ရန်လည်း လုပ်ဆောင်နိုင်လိမ့်မည်… ပိုပြီးဖတ်ပါ
VirtualBox တွင် E_FAIL 0x80004005 အမှား - အကြောင်းတရားများနှင့်ဖြေရှင်းချက်များ
VirtualBox တွင် E_FAIL 0x80004005 error – အကြောင်းရင်းများနှင့် ဖြေရှင်းချက်များ အသုံးပြုသူအများအပြားသည် MachineWrap၊ MediumWrap နှင့် အခြားအစိတ်အပိုင်းများမှ အမှားအယွင်းနှင့်ကြုံတွေ့ရပြီး အချို့သောကိစ္စများတွင် VirtualBox တွင် ထည့်သွင်းထားသည့် operating system မည်သို့ပင်ရှိပါစေ (Windows0နှင့် အစောပိုင်း၊ Linux နှင့် အခြား)။ ဒီသင်ခန်းစာအသေးစိတ်ကတော့... ပိုပြီးဖတ်ပါ
Family Link - စက်ကသော့ခတ်ထားတယ်၊ သော့ဖွင့်လို့မရဘူး - ဘာလုပ်ရမလဲ။
Family Link – စက်ပစ္စည်းကို လော့ခ်ချထားပြီး လော့ခ်မဖွင့်နိုင် – ဘာလုပ်ရမလဲ။ Family Link အက်ပ်ရှိ Android တွင် မိဘထိန်းချုပ်မှုဆိုင်ရာ ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကို ပို့စ်တင်ပြီးနောက်၊ Family Link ကို အသုံးပြုခြင်း သို့မဟုတ်ပင် စတင်သတ်မှတ်ပြီးနောက် ကလေး၏ဖုန်းသည် လော့ခ်ကျသွားကြောင်း မှတ်ချက်များတွင် ပုံမှန်အစီရင်ခံထားသည်။ ပိုပြီးဖတ်ပါ
အလုပ်မလုပ်သော HDMI သို့ VGA adapter ကိုမည်သို့ဖြေရှင်းရမည်နည်း
ကျိုးပဲ့နေသည့် HDMI သို့ VGA အဒက်တာအား ပြုပြင်နည်းကို မော်နီတာအဟောင်းများဖြင့် အသုံးပြုသူများသည် ၎င်းတို့၏အသစ်ထွက် ဗီဒီယိုကတ်များတွင် ဒစ်ဂျစ်တယ်ချိတ်ဆက်မှု အင်တာဖေ့စ်မရှိခြင်းနှင့် ကြုံတွေ့ရလေ့ရှိသည်။ ဤကိစ္စတွင်ဖြေရှင်းချက်တစ်ခုသာရှိသည် - အထူးအဒက်တာများနှင့် converters ကိုအသုံးပြုခြင်း။ ၎င်း၏ မှန်ကန်သော လုပ်ဆောင်မှု သည် အပေါ်တွင် တိုက်ရိုက် မူတည်သည်... ပိုပြီးဖတ်ပါ
"Google အကောင့်ဖြင့်လုပ်ဆောင်ရန်လိုအပ်သောအမှား" ကိုမည်သို့ဖြေရှင်းရမည်နည်း
Google အကောင့်လုပ်ဆောင်ချက် လိုအပ်သော အမှားကို ပြင်ဆင်နည်း နည်းလမ်း 1- အကောင့်ကို ဖျက်ပါ အသုံးအများဆုံး အကောင့်လုပ်ဆောင်ချက် လိုအပ်သော အမှား။ စမတ်ဖုန်းနှင့် ချိတ်ဆက်ထားသည့် အကောင့်ကို အပြီးသတ်ဖျက်လိုက်ခြင်းကြောင့် Google မှ Android စက်များတွင် ဖြစ်ပေါ်ပါသည်။ ဒါက တကယ်တော့… ပိုပြီးဖတ်ပါ
iPhone 12, 12 Pro, 11, 11 Pro, XS, XR နှင့် X တို့မှဖုန်းမြည်သံသည်အဘယ်ကြောင့်နိမ့်ကျနေပြီး၎င်းကိုမည်သို့ပိတ်ရမလဲ။
iPhone 12၊ 12 Pro၊ 11၊ 11 Pro၊ XS၊ XR၊ နှင့် X တွင် ဖုန်းမြည်သံသည် အဘယ်ကြောင့် ပိုတိတ်ဆိတ်နေသနည်း၊ အကယ်၍ သင့်တွင် iPhone 12၊ iPhone 11 Pro၊ iPhone XR သို့မဟုတ် အခြား Apple စမတ်ဖုန်းများ တပ်ဆင်ထားသည့် မည်သည့်ဖုန်းတွင်မဆို ၎င်းကို ပိတ်နည်း၊ Face ID scanner သည် အသံအတိုးအကျယ်ကို သေချာပေါက် သတိပြုမိလိမ့်မည်... ပိုပြီးဖတ်ပါ
The Last Of Us PC: အတုယူခြင်းနယ်ပယ်မှတိုးတက်မှုများ
အကယ်၍ သင်သည် အမေရိကန်နိုင်ငံတွင် ကပ်ရောဂါဖြစ်ပွားပြီးနောက် လူသားများအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲသွားသော လူသားများအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲသွားသော လူသားများအပြည့်ရှိသော ဗီဒီယိုဂိမ်းကို စမ်းကြည့်လိုပါက၊ The Last Of Us PC၊ အတုယူမှုနယ်ပယ်တွင် ကောင်းမွန်သောတိုးတက်မှု၊ ဒေတာအားလုံးကို အောက်ပါဆောင်းပါးကို ဖတ်ရှုရန် သင့်အား ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်။ ကစားရန်နှင့် သင့်ကွန်ပြူတာတွင် ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရန် သင်ကိုင်တွယ်ရန်လိုအပ်သည်။ အဆိုပါ… ပိုပြီးဖတ်ပါ
Windows7တွင် "certificate store" ကိုမည်သို့ဖွင့်ရမည်နည်း
Windows7လက်မှတ်များတွင် “လက်မှတ်စတိုး” ကိုဖွင့်နည်းသည် Windows7ရှိ လုံခြုံရေးရွေးချယ်စရာများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ဝဘ်ဆိုက်များ၊ ဝန်ဆောင်မှုများနှင့် စက်အမျိုးမျိုး၏ တရားဝင်မှုနှင့် စစ်မှန်မှုကို စစ်ဆေးသည့် ဒစ်ဂျစ်တယ်လက်မှတ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ လက်မှတ်များကို အသိအမှတ်ပြု အာဏာပိုင်များက ထုတ်ပေးသည်။ ၎င်းတို့ကို သိုလှောင်ရုံတွင်… ပိုပြီးဖတ်ပါ
Facebook ပို့စ်များတွင် မှတ်ချက်များကို ပိတ်ခြင်း Facebook လူမှုကွန်ရက် Facebook ၏တရားဝင်ဝဘ်ဆိုဒ်နှင့် မိုဘိုင်းအက်ပလီကေးရှင်းတွင်၊ အမျိုးမျိုးသော ပို့စ်များတွင် မှတ်ချက်များချန်ထားခဲ့နိုင်မှုအပါအဝင် အခြားအသုံးပြုသူများနှင့် အပြန်အလှန်တုံ့ပြန်ရန် နည်းလမ်းများစွာရှိပါသည်။ သို့သော်၊ ဤလုပ်ဆောင်ချက်သည် အရင်းအမြစ်၏ အချို့နေရာများတွင်သာ ပုံမှန်အားဖြင့် ပိတ်နိုင်သည် သို့မဟုတ် ... ပိုပြီးဖတ်ပါ
လက်ပ်တော့ကီးဘုတ်၏နောက်ခံအလင်းကိုဖွင့်နည်း အကယ်၍ သင်သည် လက်ပ်တော့ကီးဘုတ်၏နောက်ခံအလင်းကိုဖွင့်ရန် လိုအပ်သော်လည်း ၎င်းကိုမည်ကဲ့သို့လုပ်ဆောင်ရမည်ကိုသင်မသိပါက၊ အောက်ဖော်ပြပါလမ်းညွှန်ချက်များတွင် - ၎င်းနှင့်ပတ်သက်သည့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များ၊ ခလုတ်များနှင့် ခလုတ်များပေါင်းစပ်မှုများ၊ နောက်ခံမီးပေါ်မှာ… ပိုပြီးဖတ်ပါ
Play Store ရှိ Android မှဆာဗာမှဒေတာများကိုပြန်လည်ရယူသောအခါ DF-DFERH-01 အမှားကိုမည်သို့ဖြေရှင်းရမည်နည်း
Play Store ရှိ Android ပေါ်ရှိ ဆာဗာဒေတာကို ပြန်လည်ရယူသည့်အခါ DF-DFERH-01 အမှားကို ပြုပြင်နည်း Play Market ရှိ အက်ပ်များကို ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ခြင်း သို့မဟုတ် အပ်ဒိတ်လုပ်သောအခါတွင် အဖြစ်များဆုံးသော Android ဖုန်းများထဲမှ တစ်ခုမှာ DF-DFERH-01 ဆာဗာဒေတာ ထုတ်ယူမှု Error ဟူသော မက်ဆေ့ချ်ဖြစ်သည်။ "Repeat" ခလုတ်သည် များသောအားဖြင့် မည်သည့်အရာကိုမျှ မဖြေရှင်းနိုင်ပါ။ ဤညွှန်ကြားချက်တွင် အသေးစိတ်အချက်များ… ပိုပြီးဖတ်ပါ
သင်၏ PlayStation3တွင်ဂိမ်းများကို USB stick မှထည့်ပါ
Sony ၏ PlayStation3ဂိမ်းစက်မှ USB stick မှ သင်၏ PlayStation3တွင် ဂိမ်းများကို ထည့်သွင်းခြင်းသည် ယနေ့ခေတ် ဂိမ်းကစားသူများကြားတွင် အလွန်ရေပန်းစားဆဲဖြစ်ပြီး၊ မျိုးဆက်သစ်သို့ ချိတ်ဆက်မထားသော သီးသန့်ဂိမ်းများ ရှိနေခြင်းကြောင့် မကြာခဏဖြစ်သည်။ အပလီကေးရှင်းများကို ပိုမိုအဆင်ပြေစွာ ထည့်သွင်းရန်၊ သင်သည် Flash သိုလှောင်မှုကို အသုံးပြုနိုင်သည်။ … ပိုပြီးဖတ်ပါ
Xiaomi စမတ်ဖုန်းများပေါ်ရှိ နောက်ခံအဝိုင်းလေးအား ပိတ်ခြင်း Xiaomi စမတ်ဖုန်းတစ်လုံးကို နှစ်သက်သူတိုင်းသည် MIUI OS တွင် ပုံသေဖွင့်ထားသည့် နံရံကပ်ချားရဟတ်အက်ပ်ကို လော့ခ်ချခြင်းအပြင်အဆင်ပြဿနာအတွက် ထိုက်တန်သောဖြေရှင်းချက်တစ်ခုအနေဖြင့် တွေ့ရှိမည်မဟုတ်ပါ။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်၊ စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ခြင်း၏ကျယ်ပြန့်ဖြစ်နိုင်ခြေကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့် ... ပိုပြီးဖတ်ပါ
Instagram မှာ ပရိုဖိုင်အတုကို ဘယ်လိုဖန်တီးမလဲ။ နာမည်ကြီး Instagram လူမှုကွန်ရက်မှာ ပရိုဖိုင်အတုဖန်တီးနည်းကို လေ့လာချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာ မသိရင် စိတ်ပူစရာမလိုပါဘူး။ အောက်ပါဆောင်းပါးမှတဆင့် ဤပလပ်ဖောင်းပေါ်တွင် သင့်ကိုယ်သင် ဖုံးကွယ်ထားရန် လိုက်နာရမည့် အဆင့်တစ်ခုစီကို သင်ပေးပါမည်။ Instagram ဟာ… ပိုပြီးဖတ်ပါ
Reboot ကိုဘယ်လိုပြင်ရမလဲ၊ သင့်တော်တဲ့ boot device ကိုဘယ်လိုရွေးရမလဲဒါမှမဟုတ် boot media ကိုဘယ်လိုထည့်ရမလဲ၊ bootable device နှင့်အလားတူအမှားမရှိပါ
Reboot လုပ်နည်းနှင့် သင့်လျော်သော boot device ကိုရွေးချယ်နည်း သို့မဟုတ် boot media ကိုထည့်သွင်းခြင်း၊ bootable device မရှိခြင်းနှင့် ရွေးချယ်ထားသော boot device တွင် အလားတူ error boot လုပ်နည်း... ပိုပြီးဖတ်ပါ
အိုင်ဖုန်းကိုဖုန်းခေါ်နေစဉ်အဆက်အသွယ်၏မျက်နှာပြင်အပြည့်ဓာတ်ပုံ - ကျွန်ုပ်မည်သို့ပြုလုပ်နိုင်သနည်း။
iPhone တွင်ခေါ်ဆိုနေစဉ်အတွင်း အဆက်အသွယ်တစ်ခု၏ မျက်နှာပြင်အပြည့်ဓာတ်ပုံ- ငါမည်ကဲ့သို့ပြုလုပ်ရမည်နည်း။ ခေတ်မီစက်ကိရိယာတစ်ခုပေါ်ရှိ လိပ်စာစာအုပ်သည် ဖုန်းစာအုပ်တစ်ခုမျှသာမကဘဲ အီးမေးလ်လိပ်စာများ၊ လင့်ခ်များ၊ လူမှုပရိုဖိုင်များ၊ ခေါ်ဆိုမှုရွေးချယ်မှုများနှင့် လူများအကြောင်း အခြားအချက်အလက်များပါရှိသော မျှမျှတတလုပ်ဆောင်နိုင်သော အဆက်အသွယ်ဖိုင်တစ်ခုဖြစ်သည်။ … ပိုပြီးဖတ်ပါ
Instagram မှာ မက်ဆေ့ချ်ကို ဘယ်သူက ဖျက်လိုက်တာလဲဆိုတာ ဘယ်လိုရှာရမလဲ။ မက်ဆေ့ချ်ပို့ရန် အက်ပ်လီကေးရှင်းများစွာရှိသော်လည်း Instagram သည် အထိရောက်ဆုံးနှင့် အများသူငှာ နှစ်ခြိုက်မှုအရှိဆုံးတစ်ခုအဖြစ် သတ်မှတ်ခံရနိုင်သည်။ ၎င်း၏ပလပ်ဖောင်းသည် နားလည်ရန်အလွန်လွယ်ကူပြီး အခြားအက်ပ်များမရှိသည့် ကောင်းမွန်သောကိရိယာများကိုလည်း ပေါင်းစပ်ထားသည်။ ဒီနေ့ မင်းကို ပြောပြချင်တာက… ပိုပြီးဖတ်ပါ
American Megatrends Inc. ၏ BIOS update အမျိုးအစား
BIOS Update အမျိုးအစား American Megatrends Inc. မားသားဘုတ်များ အများအပြား ထုတ်လုပ်နေသော်လည်း ၎င်းတို့အတွက် BIOS ချစ်ပ်များကို ရောင်းချသူ အနည်းငယ်သာရှိသည်။ အတိုကောက် AMI ဖြင့် ပိုလူသိများသော American Megatrends Incorporated ဖြစ်သည်။ ဒီနေ့မှာတော့ ဒီ BIOS အမျိုးအစားကို ဘယ်လို Update လုပ်သင့်တယ်ဆိုတာ ပြောပြချင်ပါတယ်။ အပ်ဒိတ်… ပိုပြီးဖတ်ပါ
TikTok မှ ကိုယ်ပိုင်ဗီဒီယိုများကို ဒေါင်းလုဒ်လုပ်နည်း TikTok သည် ယခုအချိန်တွင် လူသုံးအများဆုံး လူမှုကွန်ရက်များထဲမှ ဖြစ်နေပါပြီ။ ၎င်းတွင် သင်သည် မတူညီသော ဗီဒီယိုအမျိုးအစားများကို ရှာဖွေနိုင်သည်၊ အထူးသဖြင့် ပျော်စရာကောင်းသည်။ ဤဗီဒီယိုများသည် အများသူငှာ သို့မဟုတ် သီးသန့်ဖြစ်နိုင်ပြီး ၎င်းတို့ပိုင်ဆိုင်သည့် အမျိုးအစားပေါ် မူတည်၍ ၎င်းတို့ကို ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ခြင်း သို့မဟုတ် မလုပ်နိုင်ပါ။ Fra အကောင်းဆုံး Telegram bot တွေလည်းရှိပါတယ်… ပိုပြီးဖတ်ပါ
ကွန်ပြူတာ အဖွင့်အပိတ် ချက်ခြင်း ပိတ်ခြင်း ကွန်ပြူတာတွင် အဖြစ်များသော ပြဿနာမှာ ၎င်းသည် ချက်ချင်း အဖွင့်အပိတ် ပြုလုပ်ခြင်း (တစ်စက္ကန့် သို့မဟုတ် နှစ်ခု ပြီးနောက်) ဖြစ်သည်။ အများအားဖြင့် ဤကဲ့သို့ ဖြစ်တတ်သည်- ပါဝါခလုတ်ကို နှိပ်လိုက်သည်၊ ပါဝါဖွင့်သည့် လုပ်ငန်းစဉ် စတင်သည်၊ ပရိသတ်များအားလုံး စတင်သည်၊ ပြီးနောက်… ပိုပြီးဖတ်ပါ
iPhone ကို hack မခံရဆိုတာဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ
iPhone သည် ဟက်ခ်ခံရခြင်း ရှိ၊ မရှိ သိရန် ရက်အနည်းငယ်ကြာသောအခါ၊ သင့် applephone သည် အက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခုဖွင့်ရန် အချိန်ပိုကြာသည် သို့မဟုတ် သင့်တွင် တစ်စုံတစ်ယောက်သည် သူလျှိုလုပ်နေသည်ဟု ခံစားရရုံသာရှိသည်။ ထို့ကြောင့် သင်သည် iPhone ကို ဖောက်ထွင်းခံရခြင်းရှိမရှိကို အသေးစိတ်ရှင်းပြထားသည့် ကျူတိုရီရယ်ကို ရှာဖွေနေပါသည်။ QuimeraRevo မှကျွန်ုပ်တို့သည်သင့်လျော်သောကျူတိုရီရယ်ကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်... ပိုပြီးဖတ်ပါ
link ကိုသင်၏ Telegram ပရိုဖိုင်းသို့ Android, iOS, Windows တွင်ကူးယူပါ
သင်၏ Telegram ပရိုဖိုင်ကို Android၊ iOS၊ Windows ပေါ်ရှိ မက်ဆေ့ချ်အများစုနှင့်မတူဘဲ Telegram တွင် အသုံးပြုသူ၏သတ်မှတ်သူသည် မှတ်ပုံတင်ရာတွင်အသုံးပြုသည့် ၎င်း၏ဖုန်းနံပါတ်သာမကဘဲ အပလီကေးရှင်းအတွင်းမှ လင့်ခ်အဖြစ်လည်းအသုံးပြုနိုင်သည့် ထူးခြားသောအမည်တစ်ခုလည်းဖြစ်သည်။ ပရိုဖိုင်တစ်ခု။ ထို့ထက်၊ ... ပိုပြီးဖတ်ပါ
Acer laptop တွင် "Bootable Device" အမှားကိုဖြေရှင်းပါ
Acer လက်တော့ပ် Option 1 တွင် “Bootable Device” error ကို ပြင်ဆင်ပါ- drive ကို bootable အဖြစ် သတ်မှတ်ပါ Acer laptops များတွင် “Bootable Device မရှိ” ဟူသော error အတွက် ပထမဆုံး ဖြစ်နိုင်သော အကြောင်းရင်းမှာ၊ BIOS သည် မည်သည့် device မှ boot လုပ်ရမည်ကို မသိခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်။ . များသောအားဖြင့် အောက်ပါအချက်တွေကြောင့် ဖြစ်တတ်ပါတယ်… ပိုပြီးဖတ်ပါ
Android အတွက် Windows Emulators
Android အတွက် Windows Emulators သည် Android ပလပ်ဖောင်း၏ အကန့်အသတ်ရှိသော စွမ်းဆောင်ရည်များကြောင့်၊ Windows ၏ ဗားရှင်းအပြည့်အစုံကို သီးသန့်အပလီကေးရှင်းတစ်ခုအနေဖြင့် လုပ်ဆောင်ရန် လိုအပ်နိုင်သည်။ ဤသည်မှာ ခေတ်မီ Android စက်ပစ္စည်းများ၏ တက်ကြွစွာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကြောင့် ဖြစ်နိုင်သည့် အလုပ်ဖြစ်ပြီး၊ အများစုမှာ ကိုယ်ပိုင်ကွန်ပြူတာများတွင် မနာလိုစရာမရှိသော ... ပိုပြီးဖတ်ပါ
စကားဝှက်နဲ့အီးမေးလ်မပါပဲ Facebook အကောင့်ကိုဘယ်လိုပယ်ဖျက်မလဲ။
စကားဝှက်နဲ့ အီးမေးလ်မပါဘဲ Facebook အကောင့်ကို ဘယ်လိုဖျက်ရမလဲဆိုတာ သိလိုပါသလား။ သင်သည် သင်၏ Facebook အကောင့်ကို လုံးဝမလုပ်ချင်ဘဲ၊ ၎င်းကို လုံးဝဖျက်ပစ်ရန် ဆုံးဖြတ်ထားသည်။ စကားဝှက်နဲ့ အီးမေးလ်မပါဘဲ Facebook အကောင့်ကို ဘယ်လိုဖျက်ရမလဲဆိုတာ သိနိုင်ဖို့ လိုက်နာရမယ့် အဆင့်တွေကို ညွှန်ပေးမှာလား။ ဘယ်လိုလဲ … ပိုပြီးဖတ်ပါ
ဖျက်လိုက်သော အသိပေးချက်များကို iPhone မှ ပြန်လည်ရယူနည်း Apple စက်ပစ္စည်းအသစ်များတွင် Touch ID သို့မဟုတ် Face ID တပ်ဆင်ထားသည်ဖြစ်စေ သော့ဖွင့်ခြင်းအရှိန်ကြောင့် အထူးသဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏လက်ထဲတွင် ဖုန်းကို ကောက်ကိုင်လိုက်သည်နှင့် အကြိမ်များစွာ အသုံးပြုသည့် အလိုအလျောက်စနစ်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ အသိပေးချက်များကို သင်မဖတ်မီတွင်ပင် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဖုန်းကို လော့ခ်ဖွင့်ပါသည်။ … ပိုပြီးဖတ်ပါ
Windows 10 shutdown ကို restart လုပ်လိုက်ရင်ဘာလုပ်ရမလဲ။
Windows 10 သည် shutdown တွင်ပြန်လည်စတင်သည်၊ ကျွန်ုပ်ဘာလုပ်မည်နည်း။ တစ်ခါတစ်ရံတွင် သင်သည် “Shut down” ကိုနှိပ်သောအခါ၊ သင်၏ Windows 10 ကွန်ပြူတာ သို့မဟုတ် လက်ပ်တော့သည် ပိတ်သွားမည့်အစား ပြန်လည်စတင်သည်ကို သင်တွေ့ရှိနိုင်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ၊ အထူးသဖြင့် အတွေ့အကြုံမရှိသေးသော သုံးစွဲသူများအတွက် ပြဿနာ၏အကြောင်းရင်းကို ဖော်ထုတ်ရန်မှာ များသောအားဖြင့် မလွယ်ကူပါ။ Windows 10 ပြန်လည်စတင်ပါက ဘာလုပ်ရမည်ကို ဤသင်ခန်းစာတွင် အသေးစိတ်ဖော်ပြထားသည်... ပိုပြီးဖတ်ပါ
MacOS operating system ၏အားသာချက်များနှင့်အားနည်းချက်များ
macOS လည်ပတ်မှုစနစ်၏ အားသာချက်များနှင့် အားနည်းချက်များသည် သုံးစွဲသူများစွာ အထူးသဖြင့် ဒီဇိုင်း၊ ဂရပ်ဖစ်နှင့် မာလ်တီမီဒီယာများတွင် အလုပ်လုပ်သော Apple ထုတ်ကုန်များသို့ ပြောင်းရွှေ့ရန် စဉ်းစားနေကြသည်။ macOS သည် အလုပ်နှင့် ဖျော်ဖြေရေး နှစ်မျိုးလုံးအတွက် အမှန်တကယ် ကောင်းမွန်မှုရှိမရှိ ရှာဖွေကြည့်ကြပါစို့။ Apple လည်ပတ်မှုစနစ်၏ အင်္ဂါရပ်များ လက်ထဲတွင်ရှိသော လည်ပတ်မှုစနစ် ... ပိုပြီးဖတ်ပါ
Opera ဘရောက်ဇာတွင် browsing history ကိုကြည့်ပါ
Opera browser တွင် ကြည့်ရှုမှုမှတ်တမ်းကို ကြည့်ရှုခြင်း Opera browser ရှိ လည်ပတ်ခဲ့သည့် စာမျက်နှာများ၏ မှတ်တမ်းသည် အချိန်အတော်ကြာပြီးနောက်တွင်ပင် သင့်အား ယခင်လည်ပတ်ခဲ့သည့် ဆိုက်များသို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိနိုင်စေပါသည်။ ဤကိရိယာဖြင့်၊ အသုံးပြုသူသည် အစပိုင်းတွင် ဂရုမစိုက်ခဲ့သော သို့မဟုတ် ထည့်ရန်မေ့သွားသည့် အဖိုးတန်ဝဘ်အရင်းအမြစ်ကို “မဆုံးရှုံး” ရန် ဖြစ်နိုင်သည်။ ပိုပြီးဖတ်ပါ
MegaSearch: MEGA ရှိဖိုင်များရှာဖွေနည်း
MegaSearch- MEGA တွင် ဖိုင်များကို ရှာဖွေနည်း သင် Mega ၏ မယုံနိုင်စရာ အလားအလာကို သိရှိသော်လည်း ဤကောင်းမွန်သော ဝန်ဆောင်မှုသို့ အပ်လုဒ်လုပ်ထားသော ဖိုင်များကို မည်သို့ရှာဖွေရမည်ကို အံ့သြနေပါသလား။ စိတ်မပူပါနဲ့- အင်တာနက်ရဲ့ magnum ပင်လယ်ထဲမှာ သင့်အတွက် တရားဝင်၊ ထိရောက်ပြီး အသုံးပြုရလွယ်ကူတဲ့ ဖြေရှင်းချက်တစ်ခု ရှိပါတယ်။ MegaSearch အကြောင်းပြောနေတာ။ Mega ဟာ အကောင်းဆုံးတွေထဲက တစ်ခုပါ... ပိုပြီးဖတ်ပါ
မြင်တွေ့စရာမလိုဘဲ Instagram ကိုဘယ်လိုကြည့်ရှုမလဲ။
Instagram မှာ မမြင်ရဘဲ တိုက်ရိုက်ကြည့်နည်း။ Instagram ပေါ်ရှိ အသက်တာများသည် သုံးစွဲသူတိုင်းအတွက် ကျော်ကြားသော အပလီကေးရှင်းမှ ပေးဆောင်သည့် အကောင်းဆုံးကိရိယာများထဲမှတစ်ခုဖြစ်လာသည်။ နာမည်ကြီးပြီး သိပ်မကျော်ကြားတဲ့ ဒီအံ့သြစရာကောင်းတဲ့ အင်္ဂါရပ်ကို အသုံးပြုပြီး သူတို့ရဲ့နောက်လိုက်တွေနဲ့ တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပြီး ချိတ်ဆက်ပါ။ ဒါပေမယ့်… ပိုပြီးဖတ်ပါ
Rutracker.org သည်အလုပ်မဖြစ်ပါ၊ ဘာကြောင့်လဲ၊ ဘာလုပ်ရမည်နည်း။
Rutracker.org အလုပ်မလုပ်ပါ - အဘယ်ကြောင့်နှင့် ဘာလုပ်ရမည်နည်း။ ဧပြီလအစကတည်းက၊ ရုရှား torrent tracker rutracker.org ၏အသုံးပြုသူအများအပြားသည် rutracker မဖွင့်ဆိုသည့်အချက်နှင့် ရင်ဆိုင်နေရသည်။ အပ်ဒိတ် 2016- ယခုအချိန်အထိ၊ rutracker.org torrent tracker ကို အင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုပေးသူများမှ ရုရှားတွင် ပိတ်ဆို့ထားသည်... ပိုပြီးဖတ်ပါ
Windows 10 ကို log in လုပ်တဲ့အချိန်မှာအခြား user ကဘယ်လိုပြင်ရမလဲ
Windows 10 သို့ အခြားအသုံးပြုသူ ဝင်ရောက်ခြင်း – ၎င်းကို ပြုပြင်နည်း အချို့အသုံးပြုသူများသည် ကြိုဆိုရေးစခရင်တွင် “အခြားအသုံးပြုသူ” (သို့မဟုတ် အခြားအသုံးပြုသူ) ပေါ်လာသည်ကို တွေ့ရှိပြီး သုံးစွဲသူအမည်နှင့် စကားဝှက်ကို ထည့်သွင်းရန် နှိုးဆော်ထားသော်လည်း စတင်သည့်အချိန်၌ ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းမရှိပါ။ သင်ဝင်ရောက်သည်... ပိုပြီးဖတ်ပါ
၀ င်းဒိုး ၈ (၈.၁) တွင် BIOS ကိုမည်သို့ ၀ င်ရောက်ရမည်နည်း။
ဤသင်ခန်းစာတွင် Windows 8 (8.1) တွင် BIOS ထည့်သွင်းနည်း - Windows3သို့မဟုတ် 8 ကိုအသုံးပြုသည့်အခါ BIOS သို့ဝင်ရောက်ရန် နည်းလမ်း 8.1 ခု။ တကယ်တော့ အဲဒါက ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ သုံးလို့ရတယ်။ ကံမကောင်းစွာဖြင့် ကျွန်ုပ်သည် ပုံမှန် BIOS တွင်ဖော်ပြထားသော နည်းလမ်းအားလုံးကို စမ်းကြည့်ရန် အခွင့်အရေးမရခဲ့ပါ။ ပိုပြီးဖတ်ပါ
BIOS မှတဆင့် "Safe Mode" ကိုရိုက်ထည့်ပါ
BIOS "Safe mode" မှတဆင့် "Safe Mode" သို့ဝင်ရောက်ခြင်းတွင်၊ ဥပမာအားဖြင့် network driver များမပါဘဲစတင်ခြင်းတွင် Windows ၏အကန့်အသတ်ရှိသော Boot တက်ခြင်းပါဝင်သည်။ "safe mode" သည် စနစ်အတွင်း ပြဿနာများကို ဖြေရှင်းရန်အတွက်သာ လိုအပ်သောကြောင့် OS နှင့် အမြဲတစေ အလုပ်လုပ်ခြင်း (မည်သည့်စာရွက်စာတမ်းများကိုမဆို တည်းဖြတ်ခြင်း စသည်ဖြင့်) အတွက် မကောင်းပါ။ မုဒ်… ပိုပြီးဖတ်ပါ
Xuanlong Fallout3Assault ရိုင်ဖယ် - ထူးခြားချက်များ
လာမည့်ဤဆောင်းပါးတွင် Fallout3Xuanlong Assault Rifle နှင့်ပတ်သက်သော အရေးကြီးဆုံးအသေးစိတ်အချက်များအားလုံးကို သင့်အားပြောပြပါမည်။ သင့်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ရရှိထားသောအချက်အလက်အားလုံးကိုလက်လွတ်မခံသင့်ပါ။ Fallout3Xuanlong Assault Rifle Fallout3Xuanlong Assault Rifle ကို developer အဖွဲ့မှ ကျေးဇူးတင်ရှိ၍ တီထွင်ဖန်တီးထားပါသည်။ ပိုပြီးဖတ်ပါ
ယုံကြည်ရသောဂူဂဲလ်အဆက်အသွယ်များ - ၎င်းသည်ဘာလဲ၊ ၎င်းကိုမည်သို့အသုံးပြုရမည်
Google Trusted Contacts- ၎င်းသည် အဘယ်အရာနှင့် အသုံးပြုရမည်နည်း။ အချိန်မရွေး မည်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်နှင့်မဆို အဆက်အသွယ်ရှိခြင်း၊ အစစ်အမှန် သို့မဟုတ် အတုအယောင်အရာဝတ္ထုများကို အဝေးမှ အသက်သွင်းခြင်း သို့မဟုတ် ပိတ်ခြင်းစသည့် အခြားသော အကာအကွယ်အစီအမံများကို စတင်အသုံးပြုနိုင်ခြင်း ဖြစ်နိုင်ခြေ... ပိုပြီးဖတ်ပါ
iPhone telegram လိုင်းများကိုဘယ်လိုပိတ်ရမလဲ။
iPhone ကြေးနန်းလိုင်းများကို မည်သို့ပိတ်ဆို့ရမည်နည်း။ Telegram သည် စျေးကွက်တွင် စိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံး လူမှုကွန်ရက်များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်ပြီး ၎င်းတွင် လူမှုကွန်ရက်များစွာသည် သင့်အား ကွန်ရက်တစ်ခုတွင် ပေါင်းစပ်ပေးသည့် အခြားရွေးချယ်မှုများနှင့် အကျိုးကျေးဇူးများစွာကို သင်တွေ့ရှိနိုင်သော်လည်း ၎င်းသည် ကွန်ရက်အသုံးပြုသူများကြားတွင် ရေပန်းအစားဆုံးမဟုတ်သော်လည်း၊ ပိုပြီးဖတ်ပါ
Windows 11 Drivers ကို Backup လုပ်နည်း
Windows 10 နှင့် Windows 11 ရှာဖွေမှုတွင် ပုံတစ်ပုံကို ဖျက်နည်း
Windows XP တွင် Internet Explorer ကို အပ်ဒိတ်လုပ်နေသည်။
iPhone ရှိ RAM Memory ကိုဘယ်လိုရှင်းမလဲ။
Windows 10 ၏လှပသောစတိုင်ဖန်တီးခြင်း။
Windows0တွင် error 00xc36d4c10 ကိုမည်သို့ပြုပြင်မည်နည်း။
Windows 10 နှင့် Windows 11 တွင် စနစ်ကာကွယ်ရေးကို မည်သို့ဖွင့်ရမည်နည်း။
ကွန်ပြူတာတွင် သိမ်းဆည်းထားသော နောက်ဆုံးဖိုင်များကို ရှာပါ။
Windows 10 တွင် "ပရင့်အလုပ်မဖန်တီးနိုင်ခြင်း" အမှား
iCloud မှ ဓာတ်ပုံများကို သင့် iPhone သို့ အပ်လုဒ်လုပ်ပါ။
Windows 11 မှာ Microsoft အကောင့်တခုကိုပယ်ဖျက်နည်း
bcdboot boot ဖိုင်များကို ကော်ပီကူးရန် မအောင်မြင်ပါ - ဘယ်လိုပြင်မလဲ။
Gmail မှ အဆက်အသွယ်များကို iPhone သို့ မည်သို့တင်သွင်းရမည်နည်း။
အိမ်လုပ် နှင်းဆီရေကို ဘယ်လို လုပ်မလဲ။
Hotmail စကားဝှက်ကို ဘယ်လိုပြန်ယူမလဲ။
Autocad တွင် အစီအမံများကို မည်သို့ပြုလုပ်ရမည်နည်း။
ထူထဲတဲ့ မျက်ခုံးမွှေးကို ဘယ်လို အလှဆင်မလဲ။
ကြီးမားသောဖိုင်များကို USB သို့မည်သို့လွှဲပြောင်းမည်နည်း။
Excel တွင် ဂရပ်ဖစ်များ ဖန်တီးနည်း။
Oracle ကို ဘယ်လို ထည့်သွင်းရမလဲ။
မျက်ကွင်းညိုခြင်းနဲ့ မျက်ကွင်းညိုတာတွေကို ဘယ်လိုလျှော့ချမလဲ။
သီချင်းတစ်ပုဒ်ရဲ့ chord ကို ဘယ်လိုရနိုင်မလဲ။
မင်းရဲ့ မျက်တောင်မွေးတွေကို ဆံပင်နဲ့ ဘယ်လိုဖယ်ရှားမလဲ။
Facebook link ကို ဘယ်လိုပြောင်းရမလဲ။
ကျွန်ုပ်၏အင်တာနက်၏ IP လိပ်စာကို မည်သို့သိနိုင်မည်နည်း။
iPhone တွင် gifs ဖန်တီးပါ။
iPhone ရှိ ဗီဒီယိုမှ gifs ဖန်တီးပါ။
Windows 11 တွင် desktop နှင့် folder icon များကို ချဲ့ရန် သို့မဟုတ် ချုံ့နည်း
iPhone ရှိ ပုံများ၏ အရွယ်အစားကို လျှော့ချပါ။
iPhone တွင် ဓာတ်ပုံ Resolution ကိုဘယ်လိုပြောင်းမလဲ။
Windows0တွင် အမှားအယွင်း 800x0988f10 ကို ပြင်ဆင်ပါ။
Eyeshadow ကို ဘယ်လိုလိမ်းရမလဲ။
ယောက်ျားတစ်ယောက်ကို မင်းကိုလွမ်းဆွတ်အောင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။
မင်းရဲ့ဝမ်းကွဲက မင်းကို ချစ်လာအောင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။
linear equation ကို ဘယ်လို ဂရပ်ဆွဲမလဲ။
LED strips တွေကဘာတွေလဲ၊ ဘယ်လိုဖြတ်ရမလဲ။
Página1 Página2 ... Página389 အောက်ပါ →
အန်းဒရွိုက် သင်ယူခြင်း consoles စ သိချင်စိတ် ဘယ်လို ဘယ်လိုလုပ်ရမယ် ဘယ်လိုပြန်လည်ထူထောင်ရမလဲ Facebook က firmware Google Google က Chrome ကို Instagram ကို ညွှန်ကြားချက် Internet Explorer ကို အင်တာနက်နှင့် browser များ iOS ကို itunes အားကစားပြိုင်ပွဲ Linux ကို macOS / IOS ကို / Apple Mozilla Firefox ကို မိုဘိုင်း တေးသံစုံကဇါတ် သဘောတား photoshop ကို Play Store ကို အစီအစဉ်များ ကွန်ပျူတာကိုပြုပြင်ပါ လုံခြုံရေးနှင့်ဗိုင်းရပ်စ်များ Skype ကို ဖြေရှင်းနည်းများ Windows ဖြေရှင်းချက်များ Sony vegas Spotify ရနှေးငှေ့ ကွေးနနျးစာ Viber ကို WhatsApp ကို Windows ကို Windows ကို7Windows ကို 8 Windows ကို 10 Windows XP ကို Youtube ကို zoom
© 2022 IK4.es။ မူပိုင်ခွင့်ကိုလက်ဝယ်ထားသည်။
နည်းပညာဆိုင်ရာ တီထွင်ဖန်တီးမှုအားလုံးကို ရပ်တန့်လိုက်ပါ။